သန်းရွှေ/သိန်းစိန် အစိုးရတွေ လက်ထက်ကထဲက အဖမ်းဆီးခံမွတ်စလင်တွေကို စီရင်ချက်ချပြီး ထောင်ကိုပို့ လိုက်တဲ့အခါ “မည်သည့် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခံစားခွင့်မှ မရှိ စေရ”ဆိုတဲ့ စာတမ်းကပ်လွှတ်လိုက်တာဆိုတော့လဲ ဒီကနေ့ ကာ/ချု ပ်က အထူးပြောနေစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့ | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeသန်းရွှေ/သိန်းစိန် အစိုးရတွေ လက်ထက်ကထဲက အဖမ်းဆီးခံမွတ်စလင်တွေကို စီရင်ချက်ချပြီး ထောင်ကိုပို့ လိုက်တဲ့အခါ “မည်သည့် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခံစားခွင့်မှ မရှိ စေရ”ဆိုတဲ့ စာတမ်းကပ်လွှတ်လိုက်တာဆိုတော့လဲ ဒီကနေ့ ကာ/ချု ပ်က အထူးပြောနေစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့
သန်းရွှေ/သိန်းစိန် အစိုးရတွေ လက်ထက်ကထဲက အဖမ်းဆီးခံမွတ်စလင်တွေကို စီရင်ချက်ချပြီး ထောင်ကိုပို့ လိုက်တဲ့အခါ “မည်သည့် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခံစားခွင့်မှ မရှိ စေရ”ဆိုတဲ့ စာတမ်းကပ်လွှတ်လိုက်တာဆိုတော့လဲ ဒီကနေ့ ကာ/ချု ပ်က အထူးပြောနေစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့
April 19, 2017 drkokogyi
မွတ်စလင်တွေကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးတဲ့အထဲမှာ မပါရဘူး……..
ကာ/ချု ပ်ကိုယ်တိုင်ကတော့ ပြောမှာမဟုတ်ဘူး….လို့
ဟိုရက်ပိုင်းက တွေးမိ ပြောမိပါတယ်
မွေမွေကဘဲ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး(မျှော်လင့်ချက်နဲ့)
သန်းရွှေ/သိန်းစိန် အစိုးရတွေ လက်ထက်ကထဲက အဖမ်းဆီးခံမွတ်စလင်တွေကို စီရင်ချက်ချပြီး ထောင်ကိုပို့
လိုက်တဲ့အခါ “မည်သည့် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခံစားခွင့်မှ မရှိ စေရ”ဆိုတဲ့ စာတမ်းကပ်လွှတ်လိုက်တာဆိုတော့လဲ
ဒီကနေ့ ကာ/ချု ပ်က အထူးပြောနေစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့
တတိုင်းတပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ထောင်တွေခါပြီး ခိုး/ဆိုးခါး/လုယက်သမား/မူးယစ်မှုတရားခံတွေပါ သိမ်းကြုံးလွှတ်လိုက်တုန်းက
ရဲနဲ့ ထွေ/အုပ်က တာဝန်ရှိသူတွေက
မွတ်စလင်တွေလွတ်ငြိမ်းခ.ျမ်းသာခွင့်ထဲပါလာမှာကို စိုးရိမ် ပူပန်နေကြတဲ့ မေတ္တာတရားကြီးမားလှတဲ့ ဘုရားသားတော်
တွေကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင်မှာ မွတ်စလင်တွေ မပါတဲ့
အကယ်၍ မှားယွင်းလွှတ်မိတာတွေရင်လဲ ပြန်ဖမ်းပေးပါမဲ့
အကြောင်း ပြောပြနေတဲ့ ဗီဒီယို မှတ်တမ်းလေးတွေ့လိုက်ရပါ
မွေမွေ တို့အစိုးရဟာ စစ်တပ်နဲ့ ခရိုနီတွေနဲ့ ရင်ကြားစေ့နိုင်
သမျှစေ့ထားရေးကလွဲရင်
ဘယ်သူကို ရန်သူလုပ်ရ လုပ်ရ ဝန်မလေးတဲ့ အစိုးရပါ
ကျောင်းသားတွေ ကိုရော
ဂရုစိုက်နေတယ်များထင်သလား
မဘသ နဲ့ အခု ရမ်းကားနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေ ကို NLD မွေမွေ့
အစိုးရက ကြောက်နေတယ်များ မှတ်နေသလား
သူတို့နောက်မှာ ကာ/ချု ပ် မအလရဲ့ စစ်တပ်ရှိနေလို့ ကြည့်
ဟိုတနေ့က ရခိုင်က ဘုန်းကြီးတပါး AA ထောက်ခံတဲ့ ဘောလုံးပွဲ လုပ်လို့ ဖမ်းသွားလိုက်တာ ဘယ်လိုပုံစံလဲ ကြည့်
အဲဒီတော့ တနှစ်သား မွေမွေ့အစိုးရ လက်ထက် အရင်အစိုးရနဲ့ ဘာတွေပြောင်းလဲသွားသလဲ တွေးမိနေတာတွေပါ
အခါကြီးရက်ကြီး ကန်တော့ကြ ဂါရဝပြုကြတဲ့အခါ
ခွေးကိုပါ ကန်တော့ကြရတာ ဂါရဝပြု ကြရတာကို
← အင်စထစ်ကျူးရှင်းနဲ့ လုပ်ဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံ မရှိသူက အင်စထစ်ကျူးရှင်း ခိုင်မာတဲ့ နိုင်ငံမှာ ခေါင်းဆောင်တက်လုပ်တဲ့အခါ အပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းမှု သဘောအရ တိုင်းပြည်ရဲ့ တိုးတက်မှုက ဆုတ်ယုတ်မသွားဘူး Any powerful dictator would destroy the Separation of Powers with Checks and Balances in proper Democracy which follows the Rules of written laws
ဗမာပြည်ရဲ့ ကရိုင်းမီးယားဟာ ကိုးကန့်ဒေသ၊ ကချင်ဒေသ၊ ဝ ဒေသတွေ မဟုတ်ဘဲ ဗမာစစ်တပ်နဲ့ ကြံ့ဖွတ်ပါတီသာ ဖြစ်နေပါတယ် →
Rohingya Genocide supporters at UN Human Rights Council: China, Philippines, Cuba, Venezuela and Burundi
ကျွန်တော်တို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကို ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အကြပ်အတည်းတွေက လွန်မြောက်ပြီး “သား-ရွှေအိုးထမ်းလာ” သလို အဖြစ်မျိုးဘဲ မြင်လိုပါတယ်
လက်ရှိအနေအထားက တိုင်းပြည်ကို သာသနာကို မျိုးညစ်တွေ စစ်သားညစ်တွေ အကျင့်ပျက်ရဲညစ်တွေနဲ့အတူတူ အဖွဲ့ချုပ်ကလည်း ဖျက်စီးနေတာဘဲ
Violence-in-Mandalay instigated and committed by USDP Thugs မန္တလေးအဓိကရုဏ်း” အစီရင်ခံစာကို Justice Trust ဆိုသည့် အင်န်ဂျီအိုအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်သည်
သမ္မတဟောင်းဦးထင်ကျော် ဇနီး ဒေါ်စုစုလွင်ပြော “ပိုင်ဆိုင်မှုချိတ်ပ်ိတ်စာအိတ်ကအန်တီတို့ပြန်မယူပါဘူး ကြိုက်တဲ့အချိန်ကြိုက်တဲ့သူ ဖွင့်စစ်ပါရပါတယ်။ ပင်စင်တွေ ဘာတွေလဲ အန်တီတို့စိတ်မဝင်စားပါဘူး
drkokogyi on Myanmar military badly failed…
Myanmar is still practicing the vindictive & absurd Visa Prohibition rule on former Myanmar citizens and their children
ကိုးဘွဲ့ရဆရာတော် အရှင်အာစရာလင်္ကာရ "ဗုဒ္ဓဘာသာ ပျက်သုံးတော့မလား?"
ခွပ်ဒေါင်း - ဒေါင်းတောင်ဟာ ဘုရင်မရဲ့ယပ်တောင်မဟုတ်ဘူး . ဒေါင်းသားဟာ ဘုရင်ရူးရဲ့ပွဲတော်စာမဟုတ်ဘူး
မဘသ သည်​ ၅ပါးသီလမ​ပြောနဲ့ တစ်​ပါး​သီလေ အင်္ဂါရပ်​နဲ့ ​​တောင်​မလုံပါဖူး
နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ တရားရုံး ICC ဆိုတာဘာလဲ?
Atta Kyaw :အသက်ရှည်ရှည် ခင်ခင်မင်မင်